Kenya Oo soo Saaray Shuruuc Adag Oo Lagu Ilaalinayo Lacagta Cusub Ee ay Daabacanayso. – Awdalmedia
Bangiga dhexe ee Kenya ayaa soo saaray shuruuc adag oo laga doonayo dadka bangiyada lacagaha dhiganaya iyo kuwa kala baxaya.
Dowladda Kenya ayaa shaaca ka qaaday inay soo daabaceyso lacag cusub oo hor leh sii looga hortaggo musuqmaasuqa.
Arrintan waxay saameyn ku yeelanaysaa dhammaan hay’adaha ka shaqeeya dhaqaalaha. Waxaa ka mid ah meelaha ay saamaynayso xawaaladaha Soomaalida ah ee ka howlgala dalkani Kenya. Bangiga dhexe ayaa isugu yeeray dhammaan shirkadaha xawaladaha Soomaalida ee Kenya ka howlgala.
Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Kenya Patrick Njoroge iyo guddiga xawaaladaha Soomaalida waxay ka wada hadleen shuruucda lacagaha cusub. Sida ay sheegeen madaxdii xawaaladaha ee kulanka ka qayb galay, waxaa loo sharaxay lacagaha cusub iyo qaabka laga doonayo in ay u shaqeeyaan.
Maxamed Cabdullaahi Ceynte oo ka mid ah guddiga xawaaladaha ayaa sheegay in gudoomiyaha bangiga dhexe uu ka digay lacago sharci daro ah oo uu sheegay in ay suuqa ku jiraan.
“Gudoomiyaha wuxuu noo sheegay in ay jiraan lacago sharci daro ah oo laga yaabo oo in ay dadka damcaan in ay ku badashaan doolarka,” ayuu yiri Ceynte.
Gudoomiyaha bangiga dhexe ee Kenya ayaa sidoo kale sharaxaad ka siiyay madaxda xawaaladaha Soomaalida, shuruudaha laga duunayo in ay ku shaqeeyaan. Gudoomiyaha bangiga dhex ee Kenya ayaa xawaaladaha ku wargeliyay waxyaabaha ay tahay in ay si gaar ah u eegaan si ay isaga ilaaliyaan lacaga sharci darada ah.
“Waxaa jirto waxyaabo la fiirinayo sida qof dhowr jeer kugu soo noqnoqday oo lacago badalanayo oo ah qof aadan garan karin oo aan macaamiishaada ahayn iyo waxyaabaha ku shaki galiya,” ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Ceynte.
Ceynte ayaa intaa ku daray in shaqada xawaaladaha aysan ahayn in ay lacagaha kala saraan balse ay jirto shuruuc ay tahay in ay maraan sida in dadka ay waydiiyaan aqoonsiga.
“Aniga ma aha in aan lacagaha kala saarayno oo aan dhahayno tan ayaa sharci ah iyo tanaa sharci darro ah, anaga waxaa nalaga doonayaa in nidaamka loo baahan yahay aan raacno; tusaale ahaan, marka uu qofka lacag sarifanayo in aan niraahno aqoonsigaaga soo saar,”ayuu yiri Ceynte.
Maxamed Cabdullaahi Ceynte oo ka mid ah guddiga xawaaladaha ayaa sheegay in sidoo kale ay jirto tira cayiman oo lacag ah, haddii ay gaarto ay tahay in ay ku wargaliyaan bangiga dhexe ee Kenya.
“Sharciga sii jiray ee aan ku shaqaynaynay ayaa ahaa in lacagta haddii ay gaarto 10,000 oo doolar inaan wargelino bangiga dhexe,” ayuu yiri.
Lacagta cusub ayaa looga golleeyahay in looga hortaggo musuqmaasuqa iyo wax isdaba marinta, waxay horseeday kala qeybsanaan, xilli la filayo in qeybtii ugu horreysay lasoo saaro bisha Oktoobar ee sannadkan.
Waxay arrintani ku khasbi doontaa in dad badan oo lacagaha guri dhigan jiray ay lacagtooda u qaadaan bangiyada si aysan u qasaarin.
Dadka ka faaloodu arrimaha dhaqaalaha Kenya ayaa sheegay in tallaabada ay u muuqato dabin loo dhigayo saraakiisha sida musuqmaasuqa ah ku xadday lacagta dowladda.
Askari Reer Awdal ah Oo Rasaas ku Dilay Askari kasoo Jeeda Gobolka Togdheer.